Environmental NGO raises objections against new Seychelles Hotel Project | African Tourism Board News
Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Safarka • Arimaha Dowlada • Warka Warshadaha Martigelinta • Hoteelada & Dalxiisyada • kale • Warka Dalxiiska ee Masuulka ah • Seychelles wararka safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka
NGO-ga deegaanka ayaa soo bandhigaya diidmo ka dhan ah Mashruuca cusub ee Hotelka Seychelles
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika » NGO-ga deegaanka ayaa soo bandhigaya diidmo ka dhan ah Mashruuca cusub ee Hotelka Seychelles
COVID-19 ayaa hadda caqabad weyn ku ah warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Seychelles, laakiin mashruuc cusub oo huteel cusub ayaa laga yaabaa inuu dhab ka noqdo jasiiradda Mahe.
Seychelles NGO-ga deegaanka Joogtaynta 4 Seychelles (S4S) oo ka walaacsan dhismaha hoteelka ee Anse à La Mouche
S4S waxay dooneysaa inay dhiirrigeliso waarta, ku noolaanshaha cagaaran ee Seychelles
Horumarinta Anse à la Mouche, oo ah mashruuc adeegsi isku dhafan, ayaa ah kii ugu horreeyay ee loogu talagalay xeebta galbeed ee jasiiradda weyn ee Mahe waxayna ka koobnaan doontaa aag loogu talagalay dalxiiska, tafaariiqda, degenaanshaha, iyo madadaalada.
Sida lagu sheegay warbixin ay faafisay Wakaaladda Wararka ee Seychelles, dhismaha hoteel laga dhisi doono Anse à La Mouche ayaa la bilaabi doonaa bisha soo socota iyadoo ay jiraan walaac ay ka muujiyeen urur aan dawli ahayn (NGO) Seychelles oo ku saabsan ilaalinta dhul qoyan iyo aag xeebeedka ku xeeran .
Xubin ka tirsan guddiga Joogtaynta 4 Seychelles (S4S), Marie-Therese Purvis, ayaa warqad u qortay SNA in markii mashruucan markii ugu horaysay la soo jeediyay sanadka 2019 tiro NGO-yo ah, oo ay ku jiraan S4S, ay sheegeen diidmadooda.
S4S waxay dooneysaa inay dhiirrigeliso waarta, ku noolaanshaha cagaaran ee Seychelles iyadoo lala kaashanayo muwaadiniinta, dowladda, NGO-yada kale iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
In kasta oo dadaalladeenna kala duwan, gaar ahaan in la badbaadiyo mid ka mid ah meelaha harsan ee dhul-qoyan, iyo in dhul si caddaalad ah loo wadaago, waxaan baranay toddobaad ka hor in mashruucani socdo. Wadada leexashada ee dhex marta dhulka qoyan waxaa lagu calaamadeeyay ulo bir ah waxaana noo sheegay sahamiyaashii goobta inay shaqadu bilaabmayso bisha Marso 2021, qandaraaskiina waxaa lasiiyay UCPS, ”ayuu yidhi Purvis.
Markii loo soo bandhigayay mashruuca xubnaha bulshada ee 2019, dadka ku nool aagga ayaa si weyn uga horyimid leexsiga wadada ee bulshada kala qeybineysa Intaas waxaa sii dheer leexashada waxaa loogu talagalay in lagu dhiso dhulka qoyaanka ah sida ku cad qorshooyinka la soo bandhigay, taasoo u horseedaysa burbur hor leh sababo xasaasi ah, dhir, xayawaan iyo degaankooda.
Horumarinta Anse à la Mouche, oo ah mashruuc adeegsi isku dhafan, ayaa ah kii ugu horreeyay ee loogu talagalay xeebta galbeed ee jasiiradda weyn ee Mahe, wuxuuna ka koobnaan doonaa aag loogu talagalay dalxiiska, tafaariiqda, degenaanshaha iyo madadaalada. Waxaa iska leh shirkadda Anse La Mouche Development Company Seychelles (ALDMC) waxaana horumarin doonta shirkadda Royal Development Company.
Goobta hudheelku waxay burburin doontaa qayb kale oo ballaadhan oo ka mid ah 10 boqolkiiba haray ee dhul qoyan oo ku haray Mahe, in kasta oo Seychelles ay saxiixday heshiiska. Shirka Ramsar laga soo bilaabo 2005. Hindisaha mashruucu wax faahfaahin ah kama bixin waxa qorshahooda maaraynta deegaanku u noqon karo aaggan xasaasiga ah sida dhul qoyan. Soo jeedinta kaliya ayaa ah in la dhiso weersaryo la yaqaan oo aan waxtar u lahayn dhulka qoyan, ayuu yiri Purvis.
Agaasimaha guud ee fulinta qashinka iyo ogolaanshaha wasaarada deegaanka Nanette Laure ayaa u sheegtay SNA in markii fikrada mashruucan la horkeenay wasaarada in la codsaday EIA Class 1 howshanna lagu dhameystiray ogeysiis aqbalaad ah.
Iyadoo qayb ka ah EIA la soo bandhigay, barnaamijka dib u soo celinta ayaa sidoo kale lagu daray sida dhammaan mashaariicda kale. Wasaaradda ayaa si dhow ula shaqeyn doonta shirkadda soo saarta si loo hubiyo in shuruudaha la raaco, ayay tiri Laure.
Xilliga aan saxaafadda tegayo, SNA wax faallo ah kama helin horumariyeyaasha.
Shir jaraa'id oo uu qabtay khamiistii, madaxweyne Wavel Ramkalawan, oo xilka hayey muddo ka yar seddex bilood ayaa yiri "markii aan xafiiska nimid 26kii Oktoobar, dhulka ku yaal Anse à la Mouche waa la iibiyey, mashruucu mar hore ayuu tegey. waxay u maleeyeen hanaanka EIA oo ay u martay hay'adda qorsheynta, maamulkuna mar horeba wuu ogolaaday. "
Wuxuu intaas ku daray in sababo jira awgood mooyee, aysan dowladda ka hor istaagi karin dhismaha.
Wejiga koowaad waxaa ka mid noqon doona dhismaha hudheel afar-xiddigle ah oo ka kooban 120 qol, leexashada waddooyinka, adeegyada bulshada ee xeebta, iyo weliba hoyga shaqaalaha hudheelka iyo qaybo kale.
Isaga oo ka hadlaya dhinacan mashruucan, ayuu yidhi Purvis in "mashruuca loo soo bandhigay inuu yahay" horumar adeegsi isku dhafan "laakiin diiradda la saarayo oo keliya 'wajiga koowaad' inta soo hartay ayaa dhici karta ama dhici karta mustaqbalka fog, iyadoo kuxiran sida kirada hoteelka. ”
Purvis iyo xubnaha kale ee NGO-ga waxay ka codsanayaan dowlada inay dib u eegis ku sameyso soo jeedinta mashruuca isla markaana ay tixgeliso dhamaan qodobada la soo bandhigay ka hor inta aan la siinin ogolaanshaha ugu dambeeya ee mashruucu inuu socdo.
In kasta oo dalxiisku yahay kan ugu sarreeya ee wax ka geysta dhaqaalaha jasiiradda ku taal galbeedka Badweynta Hindiya, haddana waxaa horey u jiray dhowr goobo waaweyn oo dalxiis oo ku yaal xeebta galbeed ee Mahe, gaar ahaan Kempinski Seychelles Resort, Four Seasons Resort Seychelles iyo Constancephelia.